Tsipelina - Rohy mety hahaliana.
Rohy vitsivitsy ihany mety hahaliana anao. Tsy voatery hifandray be loatra amin'ny resaka tsipelina anefa, fa mba voatsongo teny ho eny fotsiny. Raha heverinao fa manana ny toerany eto amin'ity lisitra ity ny sehatrao dia andefaso mailaka aho: MAHEFA.RANDIMBISOA/AT/GMAIL.C0M
Rakibolana: Sehatra ahitanao iny rakibolana malagasy.
Edward Keenan's Homepage: Edward Keenan dia mpampianatra mpikaroka iray momba ny linguistique, any amin'ny oniversite UCLA any Etazonia. Nandalina be momba ny fiteny malagasy izy, ary ireo boky nosoratany dia mety hanampy anao hahazo ny fomba fiforonan'ny fiteny malagasy sy ny fitsipika maro momba izany.
Lexilogos - rohy: Rohy marobe hafa momba ny fiteny malagasy.
Wikipedia malagasy: Rakipahalalana malalaka amin'ny fiteny malagasy. Miandry anao hanatevin-daharana amin'ny fampidirana lahatsoratra amin'ny fiteny malagasy, sy fanitsiana / fanatsarana ny lahatsoratra efa misy.
Telomiova: Telomiova dia tetikasa iray manana tanjona ny hampihatra ny fampiasana ny internet ho fitaovana enti-mampianatra eo amin'ireo sekoly misy eto Madagasikara. Ankoatr'izay dia faniriany ihany koa ny hamporisika antsika amin'ny fanamaroana isa ny lahatsoratra sy fitaovana amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny internet.
Kilonga.com: Torolàlana ho an'ny ray aman-dreny manabe zaza sy kilonga. Ahitana torolàlana maro manampy amin'ny fomba fitaizana.
Foibe momba ny teny an'ny Akademia Malagasy - Ofisim-pirenena misahana ny teny. Sehatra ôfisialy.
Firaketan'i Madagasikara sy rakibolana malagasy: Sehatra ahitana rakibolana misy teny malagasy hatramin'ny 70.000 isa.
Pejy fitsarana tsipelina
Malagasy online spell checker is released under Affero GPL. Documentations at the web address http://dotmg.net/spell/ are available under the FDL license.
Voaomana tao anatin'ny 9.0000000000007E-5 segondra